कारबाही रोक्न दुगड ग्रुपबाट आर्थिक प्रलोभन आएकै हो : विक्रमसिंह थापा, पूर्वएसएसपी – Rajdhani Daily
कारबाही रोक्न दुगड ग्रुपबाट आर्थिक प्रलोभन आएकै हो : विक्रमसिंह थापा, पूर्वएसएसपी
कारबाही रोक्न दुगड ग्रुपबाट आर्थिक प्रलोभन आएकै हो
विक्रमसिंह थापा, पूर्वएसएसपी
ठगीमा संलग्न दुगड ग्रुपका सञ्चालकलाई कडा कारबाही नभएका कारण ठगी तथा कालोबजारी धन्दालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । मुलुकमा अप्ठ्यारो परेका बेला धोका दिने, जनता ठगी गर्ने दुगडजस्ता व्यापारिक समूहलाई त्यतिबेलै कडा कारबाही गरेको भए अहिले टाउको उठाउन सक्दैनथे । उनीहरूलाई प्रहरी प्रशासनले दह्रो रूपमा कुनै बहानाबाजी नगरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढायो वा सम्मानित अदालतबाट कारबाहीको दायरामा ल्याइयो भने उपभोक्तालाई राहत मिल्छ । त्यसैगरी, स्थानीय प्रशासन सक्रिय भए जनता लुट्ने वा कालोबजारी गर्नेहरूले टाउको उठाउनेछैनन् ।
० अवकाशपछि तपाईंको दिनचर्या कसरी बित्दै छ ?
अवकाशपछिको जीवन एकदमै सुन्दर छ । नेपाल प्रहरीमा मैले ३० वर्ष बिताएँ । अहिले आफूलाई स्वतन्त्र भएको महसुस गरिरहेको छु । म सधैं सत्य र न्यायका लागि लड्ने मानिस भएकाले अहिले पत्रकारितामा आबद्ध छु । म आफैं पत्रकार होइन, तर पत्रकारिताकै माध्यमबाट सत्य र न्यायको पक्षमा उभिन सकिन्छ भन्ने लागेर एउटा न्युज पोर्टल ‘नेपाल तारा’ सञ्चालन गर्दै आएको छु । प्रहरीमा रहँदा मैले जे विषयवस्तुहरूसँग जुधें मेरो अवकाशपछिको जीवन पनि सत्य र न्यायकै पक्षमा उभिने अठोटका साथ यस पेसामा आएको हुँ ।
० तपाईं जुनजुन स्थानमा सरुवा भएर जानुभयो त्यहाँ वस्तुनिष्ठ काम गरें भन्ने आत्मसन्तोष भएको हो कि होइन ?
एकदमै आत्मसन्तोष छ । ३० वर्षमा २५ वर्षजति इन्चार्ज भएर काम गरें । यसमा मलाई कुनै आत्मग्लानी छैन । अझ ठूला तस्कर गुन्डा तथा सरकारी आडमा ठगी गर्ने गिरोहलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरमा ल्याउँदा आफूलाई सन्तोष प्राप्त हँुदो रहेछ । सर्वसाधारणले पनि राहत पाए । हिजो म जुन ठाउँमा बसेर काम गरें त्यतिखेर म राज्यको निकायमा थिएँ । आज सर्वसाधारण नागरिक भएको छु । आज अरू ठगिँदा भोलिका दिनमा म पनि ठगिन्छु भन्ने मेरो बुझाइ भयो । हो पनि, हिजो जसजसले ठगी गरे उनीहरूलाई म राज्यको तहमा हुँदा छुट दिएको भए मेरो गल्ती हुन्थ्यो, सर्वसाधारण पनि ठगिन्थे । यस्ता विषयलाई मैले ध्यान दिएर ठगी कालोबजारी, गुन्डागर्दीजस्ता विषयलाई सधैं निरुत्साहित गरें । जहिले पनि प्रचलित ऐन कानुनअनुसार कारबाही गरें । जसले मौजुदा संविधान, कानुन, नियमलाई उल्लंघन गर्छ उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो अहिले पनि त्यो मान्यतामा म अडिग छु ।
० तपाईंलाई अवकाश हुनभन्दा एक वर्षअघि युनिट इन्चार्ज दिइयो, यसको वास्तविक कारणचाहिँ के हो ?
हो, प्रहरीमा एउटा थिति बसालिएको थियो अवकाश पाउनुअघि कुनै पनि प्रहरी अधिकृतलाई युनिट इन्चार्ज नदिने । तर, मेरो हकमा त्यो लागू भएन । यसमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको विषेश योगदान छ । मुलुकमा नाकाबन्दी चलिरहेको काठमाडौंको जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेको र कालोबजारी घूसखोरी तथा गुन्डागर्दीसँग कहिल्यै सम्झौता नगर्ने राजनीतिक दबाबलाई कानुनी परामर्शद्वारा सही समाधान दिने मेरो स्वाभावलाई बुझेर संगठनले मलाई पठायो । अपेक्षित रूपमा संगठन आम नागरिक र सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरें भन्ने मलाई विश्वास छ ।
० काठमाडौंमा प्रवेश गरेको दुई महिनामै ठूला व्यापारिक घरानामाथि तपाईंले ठगीको कसुरमा धावा बोल्नुभयो होइन ?
जनता अत्यन्तै कठिन अवस्थामा थिए । समग्र मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा थियो । महँगी बढिरहेको थियो, कालोबजारी भइरहेको गुनासा आइरहेका थिए । मुलुक अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा प्रत्येक नागरिकले मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने, हरेक व्यापारीले, सर्वसाधारणले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो । जो उद्योगपति छन्, धनाढ्य छन् उनीहरू सर्वसाधारण र राज्यकै सहयोगमा धनाढ्य भएका हुन्, उद्योगपति भएका हुन, त्यसकारण मुलुकलाई असजिलो भएको अवस्थामा सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, मैले कारबाही अघि बढाएका मध्ये व्यापारिक घराना केएल दुगड ग्रुपका हकमा भने त्यसको ठीक विपरीत भयो । जसको सहयोगविना सर्वसाधारण तथा विपन्न नागरिकको चुलो नै बल्दैन, त्यस्तो बेलामा धारा तेलमा एक महिनामा चारपटकसम्म मूल्य वृद्धि गरेको पाइयो । त्यतिबेला हामीले कारबाही नगरेको भए धारा तेल मात्र होइन खाद्यान्नको हरेक वस्तुहरूमा यही विधि अपनाइन्थ्यो र सर्वसाधारणहरू झन् ठगिने अवस्था आउँथ्यो ।
० मुलकमा अप्ठ्यारो परेका बेला दुगड ग्रुपले सर्वसाधारणलाई करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको विषयमा गोदममा सिलबन्दी गरिदिनुभयो, मुद्दा चलाउनुभयो, तर उनीहरूलाई यस्तो विषयले छोएजस्तो छैन ?
म काठमाडांै परिसरमा भर्खरै आएको थिएँ । मुलुकमा नाकाबन्दी लागेको थियो । यस्तो परिस्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाना पकाउने ग्याँससम्मको हाहाकार थियो । काठमाडौंलगायतका देशभरका जनता पीडित थिए । यस्तो बेलामा दुगड ग्रुपले बजारमा ल्याएको धारालगायतका तेलको मूल्य एकै महिनामा चारपटक बढाइयो । किन्न नसकिने भो भन्ने गुनासो मलाई प्राप्त भयो । त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय प्रहरी थिएन, तर जनतामा परेको समस्याका बारेमा प्रहरी टुलुटुलु हेरेर बस्दैन । मैले सूक्ष्म अनुसन्धान गरेपछि उपभोक्ता वास्तविक रूपमा ठगिएका रहेछन् ।
जडीबुटीस्थित उसले सञ्चालन गर्दै आएको गोदाममा छापा मारें र त्यसमा कार्यरत कर्मचारीलाई पक्राउ गरें । मेरो पुरै युनिटले सहयोग ग¥यो । त्यतिबेला बानेश्वर वृत्तका प्रमुख डीएसपी दानबहादुर कार्कीको सहयोग म बिर्सन सक्दिनँ । उनी र मेरो सबै युनिटले सहयोग ग¥यो । पक्राउ परेका व्यक्तिहरूका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरें । अदालतबाटबाट पनि भरपुर सहयोग भयो । पक्राउ परेकाहरू पूर्पक्षका लागि थुनामा गए । तर, अहिले उनीहरूको विषयमा के भइराखेको छ ? मलाई थाह छैन । कानुनविरुद्ध जानेहरूसँग मैले कहिल्यै सम्झौता गरिनँ । मैले उनीहरूले गरेका ठगीविरुद्ध जे कदम चालें त्यसले अन्य कालाबजारियाहरूले टाउको उठाउने मौका पाएनन् ।
० दुगड ग्रुपको गोदममा छापा मार्नु पनि उनीहरू सोही प्रकारको ठगीमा संलग्न भएको देखिन्छ । तपाईंले पुरानो फाइल पल्टाउने कोसिस गर्नुभएन ?
जतिखेर मैले सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरेको थिएँ । बेच्नुपर्ने मूल्य १ सय २० रुपैयाँ तर बजारमा ४ सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ भनेपछि यसमा गडबढ छ भन्ने लाग्यो । यसको अनुगमन गर्ने निकाय अन्य छन् भनेर केही दिन कुरें, तर चासो दिएनन् । प्रहरीले चासो दिँदैन भन्ने बुझे वा अन्य केही बुझे त्यो थाह भएन । ती निकायबाट चासो नदिएपछि गलत गर्ने, कानुनविपरीत काम गर्ने अनि प्रहरी हेरेर बस्ने कुरा त सम्भव नै छैन । हस्तक्षेप गर्छ, कालोबजारी गर्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्न सक्छ । त्यो तेल बेच्ने दुगडको कम्पनीलाई मैले कारबाही नगरेको भए मुलुक कठिन अवस्थामा थियो । त्यसको फाइदा सोझै कालोबजारी गर्नेहरूलाई हुन्थ्यो ।
० तपाईंलाई आफू अवकाशको नजिक छु, व्यापारिक घरानालाई चलाउनुहुन्न भन्ने लागेन ?
हेर्नुस् , यदि तपाईं डराउनुहुन्छ भने इमान र निष्ठासँग डराउनुहोस् । एकदिन मरेर नै गइन्छ, मृत्यु छ भनेर अब केही पनि नगर्ने ? जागिर खाएपछि अवकाश हुन्छ, सबैलाई थाह छ । त्यसकारण मृत्यु हुन्छ वा अवकाश हुन्छ भनेर केही पनि नगर्ने गलतलाई पनि सही हो भनेर बस्ने ? अवकाश यतिबेला हुन्छ भन्ने मलाई थाह छ, अनि म हात बाँधेर बसूँ ? जनता ठगिएर, लुटिएर, गुन्डागर्दी सहेर बसौं ? त्यो नपुंसकता हो । नृकृष्टताको उच्चतम नमुना हो ।
त्यसकारण, यसमा म कहिल्यै चुप लागेर बसिनँ । मैले जनताप्रतिको निष्ठा, देशप्रतिको निष्ठालाई तिलान्जली दिन सकिनँ । नेपाली जनतालाई समस्या परेको अवस्थामा म टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिनँ । शान्ति सुरक्षाको सवालमा होस्, ठगीको सवालमा वा अन्य जुनसुकै विषयमा होस् मैले मेरो जिम्मेवारी निभाएको छु । जनताले तिरेका करबाट तलब खाने, उनीहरूले तिरेको बर्दी लगाउने अनि उनीहरूलाई नै धोका दिने कुरा मबाट सम्भव थिएन ।
० दुगड ग्रुपमाथि कारबाही थालेपछि त्यसका सञ्चालकहरू तपाईंको सम्पर्कमा आएक कि आएनन् ?
उनीहरू आएनन्, मैले मेरो सामू आउने मौका नै दिइनँ । दुगडको कालोबजारी र ठगीबारे कारबाही अघि बढाउँदा त्यसबीचमा मलाई राजनीतिक दबाब र आर्थिक प्रलोभनचाहिँ आएकै हो । यस विषयमा त्यतिबेलाका छापा माध्यममा पनि आएको थियो । कस्तोकस्तो दबाब आयो, मैले के गरें भन्ने विषयतिर म जान चाहन्नँ । ठूलाठूला दबाब आए, तपार्इं काठमाडांैबाट हट्नुहुन्छ, तपाईं चार–पाँच महिनामा रिटायर्ड हुनुहन्छ, यसो नगर्नुस्, हामीले भनेको मान्नुस् जस्ता विषयलाई मैले त्यही रूपमा सामना गर्दै गएँ । केहीलाई मैले तपाईं मर्नुहुन्छ त्यसकारण केही पनि नगरी बस्नुस् भन्ने जस्ता उत्तर पनि फर्काउनुपरेको थियो । जनतामाथि अत्यचार गर्ने अनि म ती अत्यचारीसँग मिल्ने कुरा असम्भव थियो । उनीहरूसँग मिल्ने प्रहरी कर्मचारी होस्, नेता होस् वा अन्य जो कोही होस्, त्यो जनताप्रति बेइमानी राष्ट्रप्रति बेइमानी हो ।
० तपाईंलाई आर्थिक रूपमा चाहिँ कस्तो प्रलोभन आएको थियो ?
आर्थिक रूपमा ठूलै प्रलोभन आएको थियो । अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलै लोभ देखाइएको हो । मसँगै आएर भनेको भए मैले त्यसलाई पनि जेल हालिदिन्थे, त्यसलाई पनि किन छोड्थे र ?
० आठ वर्षअघि पनि यस्तै ठगी धन्दामा संलग्न रहेछन् नि उनीहरू ?
ठगीमा संलग्न दुगड ग्रुपका सञ्चालकलाई कडा कारबाही नभएका कारण ठगी तथा कालोबजारी धन्दालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । मुलुकमा अप्ठ्यारो परेका बेला धोका दिने, जनता ठगी गर्ने दुगडजस्ता व्यापारिक समूहलाई त्यतिबेलै कडा कारबाही गरेको भए अहिले टाउको उठाउन सक्दैनथे । उनीहरूलाई प्रहरी प्रशासनले दह्रो रूपमा कुनै बहानाबाजी नगरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढायो वा सम्मानित अदालतबाट कारबाहीको दायरमा ल्याइयो भने उपभोक्तालाई राहत मिल्छ । त्यसैगरी, स्थानीय प्रशासन सक्रिय भए जनता लुट्ने वा कालोबजारी गर्नेहरूले टाउको उठाउनेछैनन् ।
० तपाईंले बुझाएको मुद्दा त अहिले १ देखि ९ लाख लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटे नि ?
म जतिबेला प्रहरी प्रमुख थिएँ, त्यतिबेला सम्मानित अदालतले मलाई साथ दियो । मलाई साथ दिनु भनेको कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढायो । सरकारी वकिलले मलाई साथ दिए । उनीहरूले मुद्दा सही ढंगले बुझाएका कारण पक्राउ परेका अभियुक्तहरू पूर्पक्षका लागि थुनामा गए । यसले मुद्दालाई झन् बलियो बनायो । म अवकाश भएपछि थप के भयो मलाई थाह छैन ।
० भैरहवाको भूमिगत पेट्रोल पम्प, ललितपुरमा युनिटी प्रकरण, नेपालगन्ज भगतसिंहको आतंक तपाईंकै पालामा समाप्त भयो । काठमाडौंमा दुगडको ठगी भने तपाईंले समाप्त पार्न कोसिस गर्नुभयो, त्यसलाई अन्तिम बिन्दुमा पु¥याउन नपाउँदै अवकाश पाउनुभयो होइन ?
गर्ने मान्छेलाई धेरै समय चाहिँदैन । मैले मेरो कार्यकालमा जति गरें त्यो मेरा लागि र जनताका लागि राम्रो भएको थियो । फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने जस्ता काम बाँकी नै थिए । उनीहरू भागेर कहाँ जालान् भन्ने लागेको थियो । मेरो अवकाश भयो, तर त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यहाँ त के छ भने आफू काम पनि नगर्ने, अरूले गरेको कामलाई पनि जस नदिने परम्परा छ । त्यस्तो नहोस्, अपराधीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिलेको प्रहरी प्रशासनले यसलाई टुंगोमा पु¥याउँछ । अब अहिले चाहिँ दुगडको मुद्दा के भइराखेको छ म त्यसमा अपडेट छैन ।
० अहिले पनि बजारमा विभिन्न सामानहरूको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । यसको असर जनतामा परेको छ । यसलाई रोक्नचाहिँ केके गर्नुपर्ला ?
प्रहरी मात्रैले कालोबजारी रोक्न सक्छ भन्ने होइन । यसको अनुगमन गर्ने निकाय छन्, ती निकायले ध्यान दिनुपर्छ । यदि, जनताको करबाट आफूले तलब खाएको महसुस गरेका छन् भने ती निकायले अवश्य पनि बजार अनुगमन गर्नुपर्छ र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयका सशक्त टिम निर्माण भएको छ ।
त्यो टिमले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ, जनताबाट गुनासो आउन दिनुहुन्न । उनीहरू के हेरेर बसेका छन् ? कसको आदेशमा मौन बसेका हुन् ? औषधिमा पनि कालोबजारी भइरहेको छ, अत्यावश्यक सामग्रीमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । सम्बन्धित निकाय किन मौन बसेका छन् ? त्यसमा उपभोक्ता, उपभोक्ताकर्मी तथा सञ्चार जगत् सबैले आवाज उठाउन जरुरी छ । सशक्त कानुनको अभाव छ । कालोबजारी गर्नेहरूले जनताको जीवनपद्धतिसँग खेलबाड गर्छन् । बढी पैसा लिएर सामान बेच्छन् । यस्तालाई कडा कानुन लागू गरेर सजाय दिनुपर्छ । भारतमा ५ पैसा मूल्यवृद्धि भयो भने कालोबजारियाहरूविरुद्ध जनता उठ्छन् । यहाँचाहिँ दिनदिनै ठगिएका हुन्छन् । केही हदसम्म जनता पनि सचेत हुनु जरुरी छ ।